Ogaden News Agency (ONA) – Banaabax lagaga soo horjeedo colooshood u shaqaystayaasha la soo diray oo ka dhacay Ohio
Banaabax lagaga soo horjeedo colooshood u shaqaystayaasha la soo diray oo ka dhacay Ohio
Waxaa shalay oy Taariikhdu ahayd April 9th, 2011, magaalada Columbus, Ohio ee waddanka USA ka dhacay mudaaharad balaadhan oo ay soo qaban qaabisay Jaaliyadda Reer Ogadenia oo ay xunbaha JWXO hormuud u ahaayeen.
Mudaaharadku oo lagaga soo horjeeday adeegayaasha gumeysiga Itoobiya ee KT Meles Zenawi uu soo lugeeyay ayaa wuxuu qeyb ka yahay mudaaharaddo badan oo ay Jaaliyadda reer Ogadenia ay maalmaha soo socda ku qabaneyaan gobollo badan oo kamid ah dalalka Mareykanka iyo Canada.
Dadka ku mudaharaadayay Columbus waxey isugu jireen qeybaha kala duwan ee jaaliyadda reer Ogadenia, waxaa kaloo garab socotay Jaaliyadda Oromiya ee Ohio oo qudhooda aad uga soo horjeeda dhibaatada lagu hayo shacabka Oromiya.
Waxaa Shir waxay ugu yeedheen isu soo diyaariyay iney ka qeyb galaan dadku dhow labaatameeyo oo kamid ah dabaqoodhiga doolka ah iyo dadweyne kale oo maamulada Somalida ah oo lasoo lugooyay oo markii ay arkeen anagoo hor taagan hoolkii shirka lagu qabanayay dib isaga noqdey.
Gabagabadii, wuxuu ahaa banaanbaxani guul u soo hoyatay shacabka dulman ee reer Ogadenia, gumeysiguna uu ku hungoobay mar kale. Waxaana mar kale u caddaatay gumaysiga iyo ku u ololeeya in tuulo kastoo ay damcaan inay ku dhuuntaan la hortaagan yahay!
guulaysta jaaliyadaha ogaadeeniya guullana ha idin la jiro, waa wax loo baahnaa mar walbana loo baahanyahay, wakiillada dhiigyacab sinaawi inay arkaan shaqada bulshada rer ogaadeeniya ee qurbaha ku nool, isla markaasna ay fahmaan riyadooa ay isku maaweeliyaan waxba in aysan ka jirin, nabadda ay sheegaanna ay tahay khayaali iyo been, caalamkuna uu taas yaqiinsado,
dadaala sii xoojiya, guusha idinka ayaa leh, gobanima doonka ayaa leh guusha,
gumaysiguna wuu tagi,